Thursday March 07, 2019 - 16:19:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo markale maanta lagu beegsaday mid kamida koontaroollada laga ilaaliyo qasriga madaxtooyada magaalada Muqdisho.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay sheegtay in uu sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ku dhashay qaraxii saaka ka dhacay albaaba laga galo madaxtooyada.
"illaa 15 qof oo isugu jira ciidamada iyo saraakiisha madaxtooyada kooxda Ridada ayaa ku dhintay qaraxii ay mujaahidiintu saaka ku beegsadeen mid kamida Koontaroolada xarunta Murtadiinta" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Wararka ayaa intaas ku daraya in burbur xooggan uu geystay qaraxii maanta barqadii lala beegsaday ciidamada ilaalada madaxtooyada, inta badan weerarada Xarakada Al Shabaab ee magaalada Muqdisho ayaa isbuucyadii dambe ka dhacay xayndaabka dowladda.
Dhinaca kale qarax xooggan ayaa maanta gelinkii dambe deegaanka Weydoow ee duleedka Muqdisho lagula beegsaday gaari gaashaaman oo ay la socdeen saraakiil caddaan ah.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen jugta qarax xooggan kadibna ay arkeen qiic iyo Uura Madoow oo cirka isku shareertay, gaadiidka ay adeegsadaan saraakiisha shisheeye ayaa badanaa lagu weeraraa deegaannada dhanka galbeed uga beegan Muqdisho.